कोरोनाबाट पनि बच्नु छ, बिहे पनि गर्नु छ! यो जोडिले अपनाएको उपायले बिश्व भयो चकित – Sanjal Nepal
Homeसमाचारकोरोनाबाट पनि बच्नु छ, बिहे पनि गर्नु छ! यो जोडिले अपनाएको उपायले बिश्व भयो चकित
November 12, 2020 admin समाचार 5576
कोरोनाले सन्सार हल्लाई दिएको छ । कोरोनाले प्रभाव न पारेको ब्यक्ति त यो सन्सामा सायदै भेटिएला । सामाजिक र आर्थिक जीवन चलायमान बनउन मानिसहरु उपाय पनि खोजिरहेका छन् ।
अहिलेसम्म सन्सारका सबै देशमा कोरोना पुगेको छ । लाखौंको ज्यान गै सक्यो भने करोडौं यसको चपेटमा आइसकेका छन् । यो चीनस्थित हुपेइ प्रान्तको वुहान शहरबाट फैलन सुरु भएको थियो ।
यसबीचमा चीनका एक जोडीले कोरोना नहोस् भनेर दुई मिनेटमै विवाह सम्पन्न गरेका छन् । चीनको पूर्वी क्षेत्र सानदोङका झाङ लङ र चेन साओले दुई मिनेटमै विवाह गरेको सिन्ह्वाले जनाएको छ ।
केही समय अघि उक्त विवाह सम्पन्न भएको हो । उक्त विवाहमा मात्र ६ जना उपस्थित थिए । विवाहमा बेहुला र बेहुलीको आमाबुबा र फोटोग्राफर मात्र उपस्थित भएको जनाइएको छ । विवाहमा उपस्थित सबैले विवाहको प्रक्रिया भर मास्क लगाएका थिए।
यतिबेला सन्सारभर यस विवाहको निकै चर्चा भइरहेको छ । मानिसहरुले कोरोनाबाट बच्ने हो भने यस समयमा यस्तै उदाहरणीय विवाह गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।
November 23, 2020 admin समाचार 2133
December 23, 2020 admin समाचार 1045
November 7, 2020 admin समाचार 7076